Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa HighQuality Latex ebe nchekwa ụfụfụ ohiri isi N'ogbe-Rayson Spring Mattress Manufacturer
Ezubere ikpo ọkụ nke ngwaahịa a iji wepụta ihe ọkụ ọkụ n'ọkụ wee nyefee ya ikuku.
Rayson Global Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ njikọta nke China na US, hibere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, ọ dịkwa nso na ụlọ ọrụ ama ama dịka Volkswagen, Honda Auto na Chimei Innolux
The facto Anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa na-zigara ndị ahịa mma ma ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ， kpọọ anyị ozugbo. Ọzọkwa, nnyefe anyị na-abịa n'oge ma nwee ike izute mkpa nke ndị ahịa ọ bụla. Ruo ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa njikwa mba ụwa. Ngwa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị
na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site TT, 30% Deposi na 70% itule bụ megide akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ witinin 7 arụ ọrụ ụbọchị.Can ị nwere ike inyere m aka ịme nke anyị ma ọ bụ jiri akara m na ngwaahịa ahụ? Anyị nwere ike ime akwa ụra dị ka imewe gị si dị ma ọ bụ nye ọrụ OEM naanị ị chọrọ ka ị nye anyị ọrụ nka ma ọ bụ foto foto. 1.Dinye katoonu n’elu larịị dị n’ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ matarasị ma dina n’elu ihe ndina gị. Kpachapụ anya bekee mpụga akpa na mkpa iji jide n'aka na ọ bụghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ matarasị, adịghị kpọpụ a mma.
3.Rụfee ihe mgbochi a na-ekpuchi ekpuchi na akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere nche ka akwa ahụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa, Wepu akpa rọba. Kwe ka awa iri abụọ na anọ mee ka akwa akwa ọhụrụ gị gbasaa n'ụzọ zuru ezu.